Lioka 24, Baiboly Katolika (MBC) | The Bible App
Язык БиблииMalagasy (Madagascar)
Malagasy - Roman Catholic Version (NT)
Baiboly Katolika © La Société Biblique Malgache, 2003.
Узнать больше о Baiboly Katolika
VII. TAORIAN’NY NITSANGANAN’I JESOA HO VELONA
Ny fasana foana sy ny hafatry ny Anjely
(Jereo Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Jn 20,1-2)
1Nony marainakoan’ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia nankany amin’ny fasana izy ireo nitondra ny zava-manitra efa namboariny, 2ary hitany fa efa voakodia lavidavitry ny fasana ny vato, 3ka niditra izy ireo, fa tsy nahita ny fatin’i Jesoa Tompo. 4Mbola very hevitra noho izany eo izy ireo, dia indro nisy olona roa lahy#24,4 Nisy roalahy. Dia Anjely; anankiray ihany no lazain’i Matio sy i Marka, fa angamba hafa ireo vehivavy lazain’i Lioka. niseho teo akaikiny, nitafy fitafiana mamirapiratra. 5Dia natahotra izy ireo ka niondrika, fa nilazan’iretsy hoe: «Nahoana no atỳ amin’ny maty no itadiavanareo izay velona? 6Tsy eto Izy fa efa nitsangana; tsarovy ny teny nolazainy taminareo fony Izy mbola tany Galilea, hoe: 7‹Tsy maintsy atolotra eo an-tanan’ny mpanota ny Zanak’olona sy hofantsihana amin’ny Hazofijaliana, ary hitsangana amin’ny andro fahatelo.› » 8Izay vao tsaroany ny tenin’i Jesoa.
Tsy nino ny filazan’ireo vehivavy ny Apôstôly
9Ka tafaverina avy tany amin’ny fasana izy ireo dia nilaza izany rehetra izany tamin’ny iraika ambin’ny folo lahy sy ny namany rehetra. 10dia i Maria Madelenina sy i Joana ary i Maria renin’i Jakôba izany, ary ny vehivavy hafa niaraka taminy koa dia samy nilaza izany tamin’ny Apôstôly. 11Fa nataony ho arirarira foana ny tenin’izy ireo ka tsy ninoany.
I Piera teo amin’ny fasana
(Jereo Jn 20,3-10)
12I Piera kosa anefa dia nitsangana nihazakazaka nankany amin’ny fasana, ary niondrika izy, fa ny lambam-paty ihany no hany hitany tao ka lasa nody, gaga foana noho ny zava-niseho tao.
Ireo mpianatra tany Emaosy
(Jereo Mk 16,12-13)
13Androtr’izay ihany dia nisy mpianatra roa lahy nankany amin’ny vohitra anankiray atao hoe Emaosy, tokony ho enimpolo stady#24,13 enimpolo stady. 11 km eo ho eo, satria ny stady dia sahabo ho 185 metatra. raha avy eo Jerosalema. 14Niresaka izany zava-niseho rehetra izany izy ireo. 15Ary raha mbola niresaka sy nifampilaza izay heviny teny izy, dia nanatona azy i Jesoa ka niara-dalana taminy; 16fa voasakana tsy hahafantatra Azy ny mason’izy ireo. 17«Inona izato resahinareo etỳ an-dalana, hoy Izy taminy, no toa dia efa malahelo erỳ ianareo izany?» 18Dia namaly ny anankiray atao hoe Kleôfasy ka nanao taminy hoe: «Ianao irery angaha no vahiny ao Jerosalema tsy mahalala izay zava-niseho tao tato ho ato?» 19Fa hoy Izy tamin’ireo: «Zavatra inona moa izany?» Dia hoy ireo: «Ny amin’i Jesoa avy any Nazareta, izay Mpaminany mahery tamin’ny asany sy ny teniny teo anatrehan’Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, 20dia ny amin’ny nanoloran’ny lohandohan’ny mpisorona sy ny lehibentsika Azy ho faty, mbamin’ny namantsihana Azy tamin’ny Hazofijaliana. 21Nanantena izahay fa hoe Izy no Ilay hanavotra an’i Israely: kanjo indro fa androany izao no andro fahatelo hatramin’ny nisehoan’izany. 22Nisy ihany tokoa vehivavy sasany namanay nahasanganehana anay fatratra, fa tany amin’ny fasana maraina koa izy ireo, 23ary niverina nilaza fa tsy nahita ny fatiny, nefa nahita Anjely niseho taminy, nanambara fa velona Izy. 24Dia nankany amin’ny fasana ny sasany taminay ka nahita araka izay nolazain’ny vehivavy, nefa tsy nahita Azy.»
25Ary hoy Izy tamin’izy ireo: «Ry adala, sy votsa saina amin’ny finoana izay rehetra voalazan’ny mpaminany! 26Moa tsy tokony ho niaritra izany va i Kristy mba hidirany amin’ny voninahiny?» 27Dia novoasany tamin’izy ireo ny tenin’i Môizy sy ny mpaminany rehetra manambara Azy ao amin’ny Soratra Masina. 28Nony mby teo akaikin’ny vohitra halehan’izy roa lahy izy ireo, dia nanao hoatra ny mbola handeha lavidavitra ihany i Jesoa, 29fa notanan’izy ireo nataony hoe: «Mitoera re atỳ aminay, fa efa hariva izao, efa mandrorona ny andro.» Dia niditra niara-nijanona tamin’izy ireo Izy. 30Ary rehefa niara-nihinana izy ireo, dia nandray ny mofo Izy ka notsofiny rano sy novakiny, dia natolony azy ireo. 31Izay vao nisokatra ny mason’izy ireo ka nahalala Azy, fa Izy kosa tonga tsy hitany intsony. 32Dia nifampilaza izy hoe: «Akory izany firehidrehitry ny fontsika tao anatintsika fony Izy niresaka tamintsika teny an-dalana, sy nivaofy ny Soratra Masina tamintsika!» 33Niaraka tamin’izay, dia nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin’ny folo lahy sy ny namany tafavory 34sady nilaza hoe: «Efa nitsangana tokoa ny Tompo, ary efa niseho tamin’i Simôna Izy.» 35Dia mba notantarain’izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny an-dalana sy ny nahafantarany Azy tamin’ny famakiana ny mofo.
I Jesoa niseho tamin’ny Apôstôly miaraka
(Jereo Jn 20,19-23)
36Mbola niresaka toy izany eo izy ireo, dia niseho teo afovoany i Jesoa ka nanao taminy hoe: «Ho aminareo anie ny fiadanana! Aza matahotra, fa Izaho ihany.» 37Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matoatoa no hitany. 38Ka hoy Izy taminy: «Nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no miahanàhana ao am-ponareo? 39Zahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho mihitsy ity: tsapao ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba mana-nofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo Ahy izao.» 40Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tanany, sy ny tongony. 41Ary ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo noho ny hafaliany sady mbola talanjona, dia hoy i Jesoa taminy: «Moa manan-kanina eto va ianareo?» 42Dia notoloran’izy ireo tapa-kazandrano voatono sy tantely Izy. 43ka noraisiny dia nohaniny teo imason’izy rehetra, ary ny sisa nomeny azy ireo.
Hafatra farany tamin’ny Apôstôly
44Dia hoy Izy tamin’izy ireo: «Izao no voalazako taminareo fony mbola teo aminareo Aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba Ahy ao amin’ny Lalàn’i Môizy sy ny mpaminany ary ny Salamo.» 45Dia nosokafany ny sain’izy ireo hahafantatra ny Soratra Masina, 46ka hoy Izy taminy: Araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangan-ko velona avy any amin’ny maty amin’ny andro fahatelo, 47ary tsy maintsy torina amin’ny firenen-drehetra, miantomboka amin’i Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin’ny Anarany. 48Ianareo no vavolombelon’izany.
(Jereo Asa 1,4)
49Ary Izaho kosa haniraka aminareo Ilay nampanantenain’ny Raiko#24,49 Ilay nampanantenaina. Ny Fanahy Masina.; fa mitoera ao an-tanàna ianareo mandra-pandrainareo ny hery avy any ambony.
Ny niakaran’i Jesoa any an-danitra
(Jereo Mk 16,19; Asa 1,9, 12)
50Dia nentiny nivoaka ny tanàna hatrany Betania izy ireo, ary nanandratra ny tanany Izy ka nitso-drano azy. 51Raha mbola nitso-drano azy Izy, dia nisaraka taminy, ka nakarina ho any an-danitra. 52Iretsy kosa rehefa avy nitsaoka Azy, dia niverina tany Jerosalema tamin-kafaliana lehibe#24,50-52 Ny Ascension (Fiakarana) no voalaza ao, ary mbola holazain’i Md. Lioka ao amin’ny Asa 1., 53ary tao anatin’ny Tempoly mandrakariva izy ireo nidera sy nisaotra an’Andriamanitra. Amen.
Исследуйте Lioka 24 стих за стихом